फुर्सदमा योग सिक्ने कि ? – दाङ खबर
चैत २७-परीक्षा पछिको फुर्सदिलो समय के गर्ने ? घुमफिर, मनोरञ्जन त छँदैछ । त्यसबाहेक पनि अरु केही नयाँ कुरा गर्न सकिन्छ । केही नयाँ अभ्यास गर्न सकिन्छ । त्यसो हो भने, योग किन नगर्ने ?
अझै परीक्षाको नतिजा आउन बाँकी छ । नतिजा पछि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनेछ । त्यसपछि त धमाधम विद्यालय/कलेज जानु छँदैछ । अतः परीक्षाको नतिजा आउनुअघि र विद्यालय भर्ना हुनुअघिको समयलाई सदुपयोग गर्न सकिन्छ । यसको लागि योग राम्रो विकल्प हुनसक्छ ।
योग गर्ने भनेको दिनभर योगमै तल्लिन हुनुपर्छ भन्ने छैन । दिनभर घरमा रमाइलो गर्ने, साथीभाईसँग भेटघाट गर्ने, अभिभावकसँग घुमफिर गर्ने । साँझ र विहानको समय योगका लागि दिए पुग्छ । दैनिक ४५ मिनेटदेखि २ घण्टासम्म यसका लागि छुट्याए हुन्छ ।
कसरी सिक्ने योग ?
अहिले गाउँ-शहर जताततै योगको लहर फैलिएको छ । चोक, गल्ली जतापनि योग सिक्न सिकन्छ । कुनै योग प्रशिक्षकसँग सम्पर्क गरेर उनीहरुले भने बमोजिम योग सिक्नका लागि हाजिर भए हुन्छ ।
यदि घर पायक वा आफुलाई अनुकुल हुने ठाउँमा योग सिकाउने ठाउँ छैन भने टेलिभिजन हेरेर पनि योग सिक्न सकिन्छ । अहिले त युट्युब जस्ता अनगिन्ती माध्याम छन्, जसबाट योग गर्ने तौर तरिका सिक्न सकिन्छ । ति योगका विधी, फाइदा सबै जान्न सकिन्छ ।
किन सिक्ने योग ?
महत्वपूर्ण कुरा चाहि के भने, खासमा योग गर्ने उमेर भनेकै बाल्यकालमा हो । वा किशोरवयमा हो । अहिले धेरैजसो बुढाबुढी, वयस्कले योग अभ्यास गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरु आफ्नो शरीरमा रोग लाग्न थालेपछि योग गर्न थाल्छन् । तर, रोग लाग्नभन्दा अगाडि नै योग अभ्यास गर्नुपर्छ । शरीरलाई रोग प्रतिरोधात्मक बनाउनुपर्छ ।
Prev३ वर्षीया बालिका दुर्व्यवहार गर्ने १५ वर्षीय बालकलाई नौ महीना जेलसजाय
Nextभारतमा भोलि मतदान- कसले जित्ला चुनाव ?
मौसममा बदली कायमै : आज सामान्य भोलि भारी वर्षाको सम्भावना